Madaxda Dunida oo ka Falceliyay Raridda Safaaradda Mareykanka ee Qudus - Halbeeg News
Madaxda Dunida oo ka Falceliyay Raridda Safaaradda Mareykanka ee Qudus
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu rartay Qudus safaaraddii ay ku lahaayeen magaalada Tel Aviv ee Israel iyagoo fulinaya ballan qaadkii uu Donald Trump qaaday intii uu ku jiray ololihiisii doorasho.
Wafdi khaas ah ayaa shalay oo isniin aheyd ka qeyb galay xafladda furitaanka safaaradda cusub ee uu Mareykanku ka furanayo magaalada Qudus iyadoona kusoo beegantay 70 guuradii xiligii dhulka Falastiin lasoo dejiyay Israel.
Madax badan oo soo xukumay Mareykanka iyo sidoo kale madaxda wadama kale ayaa diiday in ay safaaradooda ka furaan Qudus iyagoo sheegay in maqaamka kama dambeysta ah ee magaalada lagu go’aamin doono wada hadalada u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israeliyiinta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel ayaa sheegay in ay xafladda furitaanka safaaradda cusub ee mareykanka ay ku casuumeen 86 sal oo safaarado ku leh Israel laakiin 33 dal kaliya ay xaqiijiyeen in ay kasoo qeyb galayaan.
Hogaamiyeyaasha Falastiiniyiinta ayaa u arka bariga Qudus in ay tahay caasimadda dowladooda mustqabalka iyagoona ku micneeyay soo raridda safaaradda mareykanka mid dhaawaceysa dhexdhexaadintii uu Mareykanka ka dhex waday Israel iyo Falastiin.
Madaxda ururka Jaamacadda Carabta ayaa ku tilmaamay tallaabada Mareykanka mid dhaawaceysa dareemaha shucuubta carbeed iyo kuma Muslimiinta.
Madaxa Qeybta Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay Zaid Racad Al Xusseyn ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo toogashada ay Israeliyiinta ku hayaan dadka reer Falastiin.
Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan ayaa ku tilmaamay maalinta uu Mareykanka usoo raray safaaradiisa Qudus, Maalinka Ceebta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa u yeeray Safiirkoodi Israel iyo sidoo kale Safiirki u fadhiyay Mareykan iyagoo laga yaabo in ay gebi ahaanba xiriirka u jaraan dalka Israel.
Madaxda dalka Kuwait ayaa dhankooda ku baaqay in kulan deg deg ah ay isugu yimaadaan xubnaha golaha amaanka si looga hadlo talaabada Mareykanka.
Todobaatan guurada “ NAKBADA “ Falastiin iyo dhiigga wali qubanaayo..!!